FAQ Ceramic Precision - ZHONGHUI INTELLIGENT MANUFACTURING (JINAN) GROUP CO., LTD
Fanontaniana apetraka matetika momba ny Ceramic Precision
Mila vonjy?Aza hadino ny mitsidika ny sehatra fanohanana anay mba hahazoana valiny amin'ireo fanontanianao!
Afaka manamboatra singa seramika manokana na fandrefesana seramika marina ve i ZhongHui?
ENY.Manamboatra kojakoja seramika faran'izay tsara indrindra izahay.Manana karazana fitaovana vita amin'ny seramika maro izahay: AlO, SiC, SiN ... Tongasoa eto amin'ny fandefasana ny sarinao amin'ny fangatahana teny nindramina.
Nahoana no misafidy fandrefesana seramika mazava tsara?(Inona no tombony amin'ny fitaovana fandrefesana seramika mazava tsara?))
Misy fitaovana fandrefesana mazava tsara vita amin'ny granita, metaly ary seramika.Hanome ohatra momba ny CERAMIC MASTER SQUARES aho.
Ny Kianja Master Ceramic dia tena ilaina amin'ny fandrefesana marina ny perpendicularity, ny efamira ary ny mahitsy ny famaky X, Y, ary Z amin'ny fitaovana milina.Ireo efamira master seramika ireo dia vita amin'ny fitaovana seramika oksida aluminium, safidy maivana amin'ny granita na vy.
Ny efamira seramika dia matetika ampiasaina mba hanamarinana ny fandrindrana ny milina, ny haavony ary ny efamira milina.Ny fametahana koba sy ny fametahana milina dia tena zava-dehibe amin'ny fitazonana ny kojakojao amin'ny fandeferana sy ny fitazonana ny famitana tsara ho anao.Ny efamira seramika dia mora kokoa ny mitantana ny efamira milina granita ao anaty milina iray.Tsy ilaina ny vano hamindra azy ireo.
Fandrefesana seramika (mpanapaka seramika) endri-javatra:
Fiainana calibration maharitra
Namboarina avy amin'ny fitaovana seramika mandroso miaraka amin'ny hamafin'ny miavaka, ireo efamira master seramika ireo dia mafy kokoa noho ny granita na vy.Amin'izao fotoana izao dia ho kely kokoa ny akanjonao amin'ny fanosehana imbetsaka ny fitaovana eo ambony sy ivelan'ny masinina.
Nihatsara ny faharetana
Ny seramika avo lenta dia tsy misy porous sy inert tanteraka, noho izany dia tsy misy fikorianan'ny hamandoana na harafesina izay mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana.Ny fiovaovan'ny refy amin'ny fitaovana seramika mandroso dia kely indrindra, mahatonga ireo efamira seramika ireo ho sarobidy indrindra amin'ny famokarana gorodona misy hamandoana avo sy / na hafanana avo.
Ny fandrefesana dia marina tsy tapaka amin'ny fitaovana seramika mandroso satria ny fanitarana mafana amin'ny seramika dia ambany dia ambany raha oharina amin'ny vy na granita.
Mora kokoa ny fikarakarana sy ny fanandratana
Ny antsasaky ny lanjan'ny vy ary ny ampahatelon'ny granita, ny olona iray dia afaka manainga mora foana sy mitantana ny ankamaroan'ny fitaovana fandrefesana seramika.Maivana ary mora entina.
Ireo fandrefesana seramika precision ireo dia natao hanafatra, koa avelao ny 10-12 herinandro hanaovana ny fandefasana.
Ny fotoana fitarihana dia mety miovaova arakaraka ny fandaharam-pamokarana.
Afaka mividy ampahany amin'ny singa seramika mazava tsara ve isika?
Eny Mazava ho azy.Ny ampahany iray dia mety.Ny MOQ dia ampahany iray.
Nahoana ny CMM avo lenta no mampiasa seramika indostrialy ho toy ny taratra spindle sy Z axis?
☛Temperature stabilité: "Coefficient of Thermal Expansion" Ny 1/4 an'ny fitaovana firaka aluminium ary 1/2 an'ny vy ihany ny fatran'ny fanitarana mafana amin'ny granita sy seramika indostrialy.
☛Thermal mifanentana: Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana ny aluminium firaka (taratra sy ny tena shaft), ny workbench dia vita amin'ny granita ny ankamaroany;
☛Mitombina manohitra ny fahanterana: Aorian'ny fiforonan'ny akora firaka aluminium dia misy adin-tsaina lehibe ao anatin'ilay singa,
☛ "Rigidity / mass ratio" parameter: seramika indostrialy dia avo 4 heny noho ny fitaovana firaka aluminium.Izany hoe: rehefa mitovy ny rigidity, ny seramika indostrialy dia mila 1/4 amin'ny lanjany;
☛Fitohan'ny harafesina: tsy harafesina mihitsy ny akora tsy metaly, ary mitovy ny akora anatiny sy ivelany (tsy voapetaka), mora karakaraina.
Mazava ho azy, raha ampitahaina amin'ny seramika indostrialy, ny fahombiazan'ny fitaovana vita amin'ny firaka aluminium dia azo amin'ny alàlan'ny "sorona" henjana.
Ho fanampin'ireo antony voalaza etsy ambony ireo, ny fomba fananganana toy ny extrusion aluminium firaka dia ambany noho ny fitaovana tsy metaly amin'ny resaka fananganana marina.
Ny fahasamihafana eo amin'ny Al2O3 Precision Ceramic sy SIC Precision Ceramic
Silicon carbide seramika teknolojia avo lenta
Taloha, ny orinasa sasany dia nampiasa seramika alumina ho an'ny ampahany izay mitaky rafitra mekanika avo lenta.Ny injenieranay dia nanatsara ny fahombiazan'ny milina tamin'ny alàlan'ny fampiasana singa seramika avo lenta, ary sambany nampihatra seramika silisiôma carbide vaovao amin'ny milina fandrefesana sy milina cnc hafa.Hatramin'izao, ny milina fandrefesana ny habeny na ny fahamarinan'ny ampahany mitovy amin'izany dia mahalana no nampiasa an'io fitaovana io.Raha ampitahaina amin'ny seramika mahazatra fotsy, ny seramika karbida silisiôma mainty dia mampiseho 50% ambany kokoa ny fanitarana mafana, 30% ambony kokoa ary 20% fihenam-bidy.Raha oharina amin'ny vy, dia nitombo avo roa heny ny henjana, raha nihena antsasany ny lanjany.
Tongasoa eto amin'ny fifandraisana aminay raha mila fanazavana fanampiny.Azonao atao ny mandefa anay ny sarinao, hanolotra anao izahay ary vahaolana marina.Tsy mitovy isika!
"Tsy ela akory izay, nisy olona nanolo-kevitra ny hampiasa fomba matematika hanonerana tanteraka ny fiovaovan'ny mekanika. Ny fombantsika dia ny manenjika tsy misy fepetra ny fetran'ny fahamendrehan'ny mekanika. Mba hanafoanana ny vokatry ny fahatarana, dia manohy mikaroka ny teknolojia isika ary mampiasa ordinatera ho fanampiana fotsiny. no fomba farany ampiasaintsika.
Resy lahatra izahay fa ny fampiasana an'io foto-kevitra io dia afaka miantoka fa mahazo ny marina ambony indrindra sy ny famerenana tsara indrindra.
Vonona hanomboka?Mifandraisa aminay anio mba hahazoana teny maimaim-poana!
Precision Granite Square Ruler, Kodiaran'ny horonam-boky mitsivalana, Precision Granite Cube, Plate fandrefesana granita, Precision Granite, Stainless Steel Universal Joint,